‘ऊर्जामा बजेटको पहाड, निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादक उपेक्षित’ - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
प्राधिकरण :५६१६ मे.वा. घन्टा
निजी क्षेत्र : ५६२४ मे.वा. घन्टा
भारत : ८५१६ मे.वा. घन्टा
माग : १९७५६ मे.वा. घन्टा
‘ऊर्जामा बजेटको पहाड, निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादक उपेक्षित’
ऊर्जा खबर/काठमाडौं जेठ १६, २०७५ 5356
सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो । ऊर्जा, जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट राखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा झन्डै १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा विकासमा मात्र ८३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । तर, विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले जम्मा १४ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
उच्च प्राथमिकताका साथ अंकमा बजेट बढ्नुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । तर, सरकारको एउटा पाटोको रूपमा सहयोगी बनेको निजी क्षेत्रलाई विद्युत विकासमा प्रोत्साहन नगरिएको गुनासो छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट वा ऊर्जा दशक घोषणा कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको पनि टिप्पणी छ । यही सन्दर्भमा ऊर्जा खबरले केही उत्पादकको मत समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो
शैलेन्द्र गुरागाईं, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)
राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम क्रान्तिकारी थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तथा अघि सारिएका कार्यक्रमबीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेगा ‘प्रोजेक्ट’ निर्माण गर्ने योजना सकारात्मक हो । तर, नीतिबिनाको योजना घोषणा जस्तो मात्रै भएको छ । मेगा आयोजना निर्माण गर्न कस्तो नीति हुने र कसरी पुँजी निर्माण गर्ने भन्ने आधार छैन । निजी क्षेत्रको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने विषय समेटिएको छ ।
करिब ८४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । बजेट राम्रो वा नराम्रो भन्ने कार्यान्वयनको परिणामले देखाउँछ ।
सरकारले निजी क्षेत्रबारे केही बोलेन
खड्गबहादुर विष्ट, निवर्तमान अध्यक्ष, इपान
ऊर्जा विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसो हुँदा बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा बजेट महत्त्वकांक्षी छ । ऊर्जा विकासलाई उत्साहित बनाए पनि कार्यान्वयनकै चुनौती छ ।
पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी जस्ता जाशलय आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने कुरा सकारात्मक हो । तर, धेरै लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनामा कसरी लगानी जुट्छ भन्ने स्पष्ट छैन । बजेटमै सबै कुरा राख्न सम्भव नभएकाले प्रभावितलाई मुआब्जा दिने, कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउला ।
देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी आयोजना बनाउनै पर्छ । निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी कुनै वाक्य अर्थ मन्त्रीको बजेट भाषणमा सुनिएन । अघिल्ला वर्षमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
विद्युत उत्पादकका समस्या उस्तै रहे
सुवर्णदास श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनी
बजेटले ठूला प्रसारण लाइन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जाँदैन भन्ने हो । र, गुणस्तरीय पनि हुन्छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अघि बढाउने पक्ष पनि सकारात्मक छ । यसले हामीलाई दुवै छिमेकी देशसँग विद्युत प्रवाह गर्न टेवा पुग्नेछ । निजी क्षेत्रलाई बजेटले छुन सकेन ।
विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सम्बोधन होस् भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा थियो । यो भएन । बजेटले घोषणा गरेको ‘ऊर्जा दशक’ को लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
लगानीको प्रतिफल सुरक्षित हुने गरी विद्युत खरिद दर बढाउने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा हुने ढिलाई सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो । यो पनि प्राथमिकतामा परेन । यद्यपि, ऊर्जा विकास उच्च प्राथमिकतामा छ ।
शीर्षकअनुसार बजेट खर्च गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा बजेट फ्रिज भएको इतिहास छ । यसैले खर्च क्षमता बढाएर ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न जोड दिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई निराश बनाइयो
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान , कोषाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
विगतको तुलनामा बजेट धेरै व्यवहारिक आएको छ । ऊर्जा विकास उच्च प्राथमिकतामा छ । तर, यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेदेखि लगानी भित्र्याउनेबारे केही सम्बोधन भएन ।
ऊर्जा दशक, हरेक प्रदेशमा मेगा प्रोजेक्ट, लगानी प्रवर्द्धन निजी क्षेत्रले उठाएका विषय हुन् । यद्यपि, यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कसरी लगानी ल्याउने भन्ने देखिएन । हरेक प्रदेशमा एक–एक ठूला आयोजना बन्ने आधार भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो ।
पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने भनिएको छ । तर, कुन मोडलमा जाने वा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने आएन । यता निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्दै विद्यमान समस्या समाधान गर्ने भन्ने उल्लेखै भएन । यसैले, ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाइयो ।
निमुवा-टंकिसिनवारी प्रसारण लाइनकाे साढे ८ सय मिटरमा टेलिस्कोपिक पोल
विद्युत उत्पादन सीमा १५ हजार मेगावाट पुर्याउन टेक अर पे पिपिए खुल्याे
निक इलेक्ट्रो टेक प्रदर्शनी २०१८ हुने
जनता बैंकले ६८ करोड ६६ हजार नगद लाभांश वितरण गर्ने
माथिल्लाे बलेफी ‘ए’ आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण पूरा
सरल ऊर्जाले थापाथलीमा २७ किलोवाट ‘रुफटप सोलार’ जोड्यो
कोसी कोरिडोर ठेक्का, सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर खल्तीको कानुनमा निर्णय
विद्युत नियमनआयोगको पदाधिकारीमा १८ जनाको दौड
प्राधिकरणका १ सय ४५ विद्युत महसुल संकलन केन्द्रमा अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली
दोर्दीखोलाको मुख्य सुरुङ छेडिन ६ सय मिटर बाँकी